Kirira mamy Leningrad Leningrad
Angamba, ireo mpankafy vitsy amin'ireo voankazo tsara tarehy avy any amin'ny faritra atsimo dia mahafantatra fa misy karazany an'arivony maro amin'ny kiriodra mamy eo amin'ny natiora. Ankoatra izany, isan-taona dia mihamitombo izany. Noho izany, manana ny fahafahana misafidy ny karazana kirizy mamy izay hitombo tsara ao amin'ny faritra misy anao ianao, amin'ny fanehoana ny endriky ny klimatika sy ny endriky ny tany.
Fantatray amin'ny kiriolona mamy "Valery Chkalov"
Tsy fantatro ny momba anao, fa iray ihany no eritreretiko momba ity farihy mavomavo ity, misy faniriana mahery vaika hanandrana izany. Misy karazany maro karazana kerobia mamy: avy amin'ny mena mena? to burgundy and yellow. Cherry, izay vahiny amin'ny lohahevitra anio, dia fongana tahaka an'i Valeria eo amin'ny vahoaka.
Raha miresaka momba ny karazana tsaramaso tsara indrindra, ilaina ny miantso ny karazana varotra. Ny fiantohana tsara dia manome antoka antsika hanome antsika mamy sy mamy tsara. Manolotra ireo liam-pon'ireo liana liana isika handinika ity karazana ity amin'ny antsipiriany bebe kokoa. Ny karazana divay mahafinaritra dia manondro ireo karazana ririnina amin'ny ririnina, miaraka amin'ny ronono avo lenta sy ny fahanterana.
Kirosy mamy "Regina"
Ny tsiranon'i Cherry dia manomboka amin'ny tapany faharoa amin'ny volana Jona. Noho ny fialofana fohy amin'ireto voankazo ireto, dia tsy azo atao ny mihinana ny voankazo matsiro ao anatin'ny volana maromaro. Amin'ity tranga ity, dia azafady ny karazana kiriodrialy "Regina", izay anisan'ny vary varimbazaha. Hanambara ireo karazana tsiambaratelo rehetra isika ary hahafantatra ny fitsipiky ny fambolena.
Cherry "Heart Bull"
Ny mpamboly tsirairay dia mikasa ny hamboly ao amin'ny zaridainany ny karazana tsara indrindra amin'ny hazo zaridaina mba ahafahany mamokatra be dia be. Na dia izany aza, ny tsiro sy ny lokon'ny safidy rehetra dia samy hafa. Noho izany, mba hanitarana ny fahalalanao ny kiririoka, dia hahafantatra anao amin'ny karazan-javamaniry miavaka amin'ity hazo zaridaina ity ianao - "Heart of Heart".
Kirosy mamy "Revna"
Io karazana tsaramaso mamy io dia mitovy amin'ny ray aman-dreniny - cherry mamy "Pink Bryansk", saingy mbola misy fahasamihafana be ihany. Ary raha manapa-kevitra ny hamboly kerobima mamy amin'ny sainao ianao, dia tena zava-dehibe ny mahafantatra ny tsipiriany rehetra momba ny voankazo, ny hazo, ny tifitra, ny fiantraikany ary ny tsy fahampian'ny vary. Noho izany, mandinika amin'ny antsipiriany ny karazana "Revna" ary mianatra momba ny endriky ny fambolena ny zana-ketsa sy ny fikarakarana hazo.
Mofomamy mamy "Bryansk Pink"
Anisan'ny toerana manokana ny karazana kiriolona mamy "Bryansk Pink". Ity karazana ity dia tsy niseho ela be tany amin'ny Governemanta Rosiana, fa noho ny tsiron'ny voankazo sy ny bika aman'endriny dia hita any amin'ny tranonkalan'ny mpamboly amina amboara androany. Hiresaka bebe kokoa momba ny endriny sy ny fomba hambolena sy hikarakarana hazo ianao.
Ny Cherries dia tsy afaka mirehareha amin'ny haben'ny voankazo toy ny voankazo hafa. Na dia izany aza, misy ireo karazana mamy tahaka izany, izay ao anatin'ny fampitahàna intraspecific dia tena goavana. Anisan'izy ireo, mendrika ny mitadidy ny karazana "cherry sweet" Krupnoplodnaya, izay miteny ho azy manokana.